Maitiro ekudzima enzvimbo-akavakirwa kushambadzira pane iyo iPhone uye iPad | IPhone nhau
Maitiro ekudzima enzvimbo-akavakirwa kushambadzira pane iPhone uye iPad
Kuti tinakidzwe neruzivo kana masevhisi painternet mahara zvachose, tinofanirwa kuziva kuti hapana munhu anoshandira rudo rwehunyanzvi uye kuti kushambadzira iyo huru uye dzimwe nguva kutsigirwa chete kwemapeji mazhinji uye mablog kuti isu takatsaurirwa kuzivisa zvemahara. Kwete chete iwe unofanirwa kubhadhara vaparidzi seni vanozvipira kunyora zuva nezuva, asi iwe zvakare unofanirwa kubhadhara maseva pane iyo webhusaiti inogarwa, nzvimbo yekuchengetera yakatorwa ... Ndosaka pese patinotaura nezvevashambadzi blocker, isu tinofanirwa tora idzi mhando dzezvinhu mukutarisa. Pasina kushambadzira hazvingagone kuchengetedza mhando iyi yebasa.
Kusiya parutivi mubvunzo wekushambadzira, patinowanzo fambisa internet, isu tinowanzo gara tiine nzvimbo yechigadzirwa chedu chakaitwa natively, ikozvino iko kushandiswa kwayo kwadzikiswa zvakanyanya uye hazvidiwe kuti iite kuti ienderere mberi senge bluetooth neWi-Fi.
Nekuita kuti nzvimbo ishandiswe patinoongorora, patinoshanyira mamwe mapeji ewebhu, tinogona kuona kuti kushambadza kwakaratidzwa kunoongorora sei nzvimbo yedu. Kushandisa kushambadzirwa kwekushambadzira inzira iri nyore yemabhizimusi madiki emuno kupa masevhisi avo kuburikidza neGoogle chikuva, munzira isina kukwana kuitira kuti mari yakasimwa mukushambadzira ive inobatsira. Neraki, isu tinokwanisa kudzora rudzi urwu rwekushambadzira kuitira kuti kushambadzira kwakanangwe zvinoenderana nenzvimbo yedu kusaratidzwe.
Dzima shambadziro zvichibva nenzvimbo yedu
Mukati meZvirongwa, tinotarisa sarudzo Privacy.
Iye zvino tinokwira kumusoro Nzvimbo, yekutanga sarudzo inowanikwa mukati meMenu Yekuvanzika.
Iye zvino tinofanirwa kuenda kumagumo emenyu uye tinya pa System masevhisi.
Mukati meSystem Services, tinotarisa sarudzo maAds nenzvimbo uye uncheck the tab.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima enzvimbo-akavakirwa kushambadzira pane iPhone uye iPad
Tekinoroji uye Hutano, zvinhu zviviri zvakagadzirirwa kusangana
Imwe nyaya ye "iPhone 5se" inosimbisa iyo yakafanana dhizaini seye5